अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर,औषधि पनि खान मानेनन् — Motivate News
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर,औषधि पनि खान मानेनन्
Posted on July 10, 2018 by Ghanshyam Shrestha
असार २६, जुम्ला – १० दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । उनले अत्यावश्यक औषधिसमेत खान नमानेका कारण अवस्था जटिल बन्दै गएको हो ।
अहिले संक्रमणबाट बचाउन स्पेसल केयर युनिटमा राखेर निगरानी मात्र गरिएको डा. प्रवीणकुमार गिरीले बताए । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको छ ।
‘डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन प्रतिकूल बन्दै गएको छ, बचाउनका लागि जुनसुकै वेला आइसियू आवश्यक पर्न सक्छ,’ डा। गिरीले भने, ‘तर, जुम्लामा तत्काल यो सम्भव छैन ।’